Gịnị bụ igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ogige ntụrụndụ - ngwọta maka nsogbu ndị ahụ
Ogige ntụrụndụ - ngwọta maka nsogbu ndị ahụ
Gịnị bụ igwe kwụ otu ebe?
Anyị nọ na ebumnuche iji nwetakwu ụmụaka na-agba ịnyịnyaanyịnya igwe, na ịnụ ụtọ ya mgbe ha nọ na ya. Anyị echepụtalaParks Cyclesụmụakaanyịnya igweiji nwee ogwe osisi aluminom dị fechaa, nke nwere geometry kwesịrị ekwesị, nke e mere iji nwekwuo obi ike ma nyere nwa gị aka ịme nke ọma n'ọchịchọ inwe obi ụtọ na haigwe kwụ otu ebe.
Oh na-arịa ọrịa, taa anyị na-agba ịnyịnya na BCPOV na Santa's bike park? Anaghị m egwu egwu. Dị ka ọtụtụ ndị debanyere aha ọwa maara, mụ na nwunye m nọ n'okporo ụzọ njem gafere North America. Mgbe anyị gachara ebe ọwụwa anyanwụ ruo na Quebec na ndịda niile na Florida, anyị mechara gafee ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ.
Anyị siri Arizona pụọ ​​wee rute ugwu San Bernardino na mpụga Los Angeles. Anyi biara ka anyi nya ụgbọala n’otu ebe ana kpo Skypark nke di n’elu elu ugwu ahu. N’ezie, ebe a adịghị ka ogige ezumike ndị ọzọ m jerela.
Nke mbu, o buru ogige ebe ekeresimesi. Debe ya na ụlọ ịke Europe, ụgbọ oloko, nleta Santa na nwanne ya nwoke na nwunye nwanne ya nwoke na ndị ọ bụla nọ. Ka o sina dị, ị ghọtara ihe dị mkpa.
Ọ bụ obodo a na-akpọ ekeresimesi n’afọ n’afọ na ihe odide niile esoro ya. Mana dịka o siri pụta, ndị nwe ogige ahụ bụkwa ndị na-agba ugwu ugwu ma kpebie itinye ọgba tum tum ugwu na ebe ndị ọzọ. Ma ọ bụ ezie na ọ bụ n'elu? a nnọọ nnukwu ugwu, ogige bụ naanị banyere 380 ụkwụ elu.
Ma maka $ 49 maka otu ngafe ụbọchị, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ụdị oche oche ma ọ bụ mgbagharị na-echere gị ebe a. Ọfọn, ị mehiere, mana hey, dịka Ugwu Spider 350-ụkwụ na Texas gosipụtara na ịchọghị nnukwu uru dị elu iji nwee anụrị. Yabụ kedu ihe ị ga-eji chọọ oche oche? Na-atụgharị na Skypark malitere nke ukwuu.
Mgbe anyị zutere Tony site na ọwa YouTube, nke dị n’èzí MTB. Mana nkwupụta mbụ ya na ịbụ onye a ma ama abụghị n'ezie YouTube. Offọdụ n'ime unu nwere ike ịma ya site na mmalite ya dị ka onye na-agba ọsọ skater na ngwụsị 90s na mbido 2000s.
Anyị na Alan sonyekwara na MTB Alanand, nwunye ya Kelly. Ndị a niile bụ ndị obodo na mpaghara ahụ. Yabụ na ọ dị mma ịnọnyere anyị igosi anyị ụzọ.
ịghọ onye nkuzi na-atụ ogho
Ekwuru m na mbụ na enweghị igwe mbuli ebe a. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ ntakịrị ihe nkoropụ, ihe a na-akụ azụ na-adị jụụ, gịnị ka ọ bụ? zuru oke dika m na-ezube ime otutu ogwe dika o kwere mee taa. Ka anyị na-aga, achọpụtara m ihe mere o jiri dị mma ịlaghachi n'osisi ndị ahụ toro ogologo.
Anyị ejirila izu ole na ole gara aga na-anyagharị ụzọ ụzọ ọzara. Ma mgbe ị na-agba ọzara bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, ịkwọ ụgbọ elu ndị a toro ogologo na ala a gbahapụrụ na-adị m ka ụlọ obibi m na ịrịgo ahụ, enwere obere nsogbu na nsọtụ ụzọ ahụ. Onye na-enweghị ike iguzogide onye dị gịrịgịrị? Oh Chukwu.
Nke ahụ bụ ịnyịnya ibu. Maka agba nke mbụ, anyị kpebiri ịga ụzọ akpọrọ Arrow, nke akpọrọ aha nkịta Skypark, jupụtara na atụmatụ. N'ezie, sekọnd ole na ole enwere ihe ọhụụ. (Egwu na-akpali akpali) (egwu na-akpali akpali) (egwu na-akpali akpali) (egwu na-akpali akpali) (egwu na-akpali akpali) (egwu na-akpali akpali) (egwu na-akpali akpali) (egwu na-akpali akpali) Oh, na-arịa ọrịa. (egwu dị egwu) whoa. (enlivening music) (egwu enlive) (enlive music) so many hoops. (ọchị) (ume na-akpali akpali) - Ndo.
Lee, anyị nwere okpukpu abụọ - dịkwa mma. (egwu na-akpali akpali) Aga m enweta oge a. (egwu na-akpali akpali) (egwu na-akpali akpali) a hụrụ m ya n'anya mgbe ha chịkọtara ọtụtụ atụmatụ n'otu ụzọ.
Ọ na-echetara m n'ezie nke Cat's Pawat Highland Bike Park na New Hampshire. Ọ dị mma, ugbu a ka m ghọtara ihe kpatara ị ga - eji pụọ $ 50. (chịrị ọchị) Mana akụ abụghị naanị ụzọ jupụtara na njirimara.
Oh Chukwu. - Gaba. - Nweta ntakịrị n'ihu oge a.
Trazọ anyị na-esote, Comet, bụ ihe ndị mmadụ ga-ahụ n'anya ma ọ bụ kpọọ asị. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ jupụtara na akpụkpọ ahụ. Oh
Akpụkpọ anụ (chị ọchị) - Ee, dude. - Ọ bụrụ na ọ nọ ebe ahụ, mgbe ahụ aga m agba ịnyịnya ya.
Obodo ya Ewok ebe a. Onwe m, ọ na-atọ m ụtọ ịnya ha, mana nke ahụ nwere ike inwe ihe jikọrọ m na ụzọ ụkwụ m nke ịnọ n'ụsọ ugwu nke Vancouver. Ebee ka echepụtara àkwà mmiri ubube.
Ha ghọrọ ndị a ma ama mgbe igwe kwụ otu ebe dị mkpụmkpụ na akụkụ ntụgharị ihu ndị dị elu, yabụ na-eji nwayọ agba. Ma ebe ọ bụ na anyịnya igwe enduro taa dị ogologo ma na-amị amị, ha anaghị eso ha egwu nke ọma. Na ụwa ebe ịgba ịnyịnya ugwu na-agba ọsọ na ọsọ ọsọ, enwere m ike ịghọta ihe kpatara akpụkpọ anụ anaghị adị ewu ewu ọzọ.
Ma, obi na-atọ m ezigbo ụtọ. Oh Chineke, nke ahụ dị jụụ, na-arịa ọrịa, na-atọ ụtọ. Oh, nke ahụ bụ ihe efu - ee.
Enwere nwoke ahụ. - Ka m lelee ya ngwa ngwa. Oh, ị nwere nhọrọ abụọ.
Nke ahụ bụ mara mma ugwu ugwu. Eeh. Ihe na-adọrọ adọrọ bụ na Comet abụghị naanị ụzọ nwere akpụkpọ anụ na ugwu ahụ.
Oh Chukwu. Site na m na-ekwusi ike ime ụzọ ọ bụla dị n'ogige ahụ taa, dọkpụrụ ndị ọrụ anyị enweghị mmasị na Naughty ma ọ bụ Nice. Oh
Oh, enwere osisi ugbua. Ma ụzọ a nwere ihe dị obere na ịnyagharị ugwu ugwu ụbọchị ndị a. Na-achịkwa.
Oh Chukwu. Enwetara m ya ma ọ ka na-eto site na mgbe Tony jere ije na ya. O yiri ka ọ bụụrụ ndị ọchịchị na ụlọ ọrụ ịnshọransị ibu arọ.
Njirimara ndị a tilt mgbe ị na-anyafe ha. - Ukwuu. - Oh, akwa mgbago.
Oh Chukwu. Oh Chukwu. Oh Chukwu.
Oh Chukwu. Ka ọ na-aga n'ihu, akụkụ dum nke ụzọ ụkwụ ahụ bụ naanị nnukwu, dị warara. Nke ahụ gara n'ihu na nhuba ọzọ.
Oh, mgbawa ọzọ. Oh, ọ dị ezigbo mkpa. Oh Chukwu.
Oh Chukwu. Oh chukwu. Ọ gwụla ma Yuka amaghị nke ahụ. (Mkpu) companieslọ ọrụ mkpuchi ndị ahụ nwere ike ịbụ eziokwu.
Laghachi elu. Yep.Oh.Front saa anya ma echere m na ikekwe ị ga-asọghachi ebe ahụ.- Ee.- Oge eruola ka ị were ụzọ ahụ kachasị ewu ewu na ogige.Neverland.Neverland dị na Skypark dị ka A-line bụ Whistler.
Ọ bụ ọtụtụ jupụta na ọ na-atọ ụtọ. Uzoamaka.Yoy.Rad.Puh. (grunts) adịghị efe ngwa ngwa.
Poof, ọrịa, poof, poof, oh god - yeah enyi. - Eeh. (grunts) Anaghị m eme ya ugbu a.
Oh, nke ahụ bụ curvy. Phew Nke ahụ bụ naanị mbido mbụ m na Neverland. Mana ọ bụchaghị nke ikpeazụ m.
Ee ebe a dị mma. - Ee - Ọ bụghị oge ezumike na nzọ ụkwụ, ị maara? Kpamkpam. Mana ị maara, Neverland nwere ike ịmali ọtụtụ, mana ọ nweghị nke kachasị ukwuu na ogige Parkby a na-akpọ Obodo Nta Oge Oge.
Nke a bụ nnukwu n'ime ogige ahụ. Ọ bụ otu ihe ijuanya maka oge. Nke a bụ ebe ndị mmadụ na-anọpụ ma na-eme ka ịwụ elu.
Ekwesịrị m ịsị na ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Naanị tinye mpịakọta a n'ọnụ gị. Ọ na-ezigakwa gị n'ụzọ zuru oke n'ime mgbanwe ahụ.
Aghọtara m ya nke ọma n'oge ahụ - ee. Nke ahụ kacha mma. Ya mere, gịnị ka m chere banyere Skypark n'ikpeazụ? Ekwesịrị m ịsị na ọ bụ ihe ijuanya mara mma.
Ikwu eziokwu n’eziokwu, anụtụbeghị m ya ruo mgbe Tony na Alan kwuru na ọ dị ka ebe mara mma. N'ihi ya, anyị kpebiri ịnwale ya. Maka ndị bi na LA, oke ọhịa pine siri ike ị nweta.
Ma, dị nnọọ ụgbọala n'elu San Bernardino Ugwu na ị nwere paini ọhịa? Ọbụna nwoke a si BC chere n'ụlọ n'ebe ahụ. Ihe niile dị na Skypark bụ nke ọma wuru ma rụọ ọrụ nke ọma. Enwere atụmatụ dị mma, dị jụụ ebe niile.
Mana ntinye ntinye nke $ 49 dị ntakịrị, ọkachasị n'ogige igwe kwụ otu ebe na oche oche dị ka Highland ma ọ bụ Ududo ugwu na-efu otu ọnụahịa ahụ. Ma ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị njem nleta na-abịa ma dị njikere ịkwụ ụgwọ $ 49 naanị maka obodo Santa. M nwere ike na-management management gá »‹ na-abá »‹ a ego.
N'ikwu ya, njem kwa afọ bụ asọmpi mara mma na $ 299, ndị na-agba ugwu ugwu ebe a na-achọ. Dị ka ọ dị na mbụ, daalụ maka ikiri ma nọrọkwa na nsogbu.
A na-ahapụ igwe kwụ otu ebe n’ogige ntụrụndụ mba?
Gba ígwèsite naogige mbabụ ụzọ dị mma iji hụ ọmarịcha mma ma chọpụta ebe ọhụụ.Ndị na-agba ịnyịnya ígwènwere ike ịga njem n'okporo ụzọ (nke na-enweghị ụgbọ ala mgbe ụfọdụ!) Na, na ụfọdụogige ntụrụndụ, na họrọ ụzọ ụkwụ. .fọdụogige mbaonyinyeigwe kwụ otu ebemgbazinye, na ndị ọzọ na-eduziigwe kwụ otu ebeihe omume.Sep 4, 2019
ole carbs ka m kwesiri iri
M nnọọ ụgbọala gaa n'ebe ọdịda anyanwụ ọnụ ụzọ ámá nke Yellowstone, ha plowed n'okporo ámá ọ bụla mmiri tupu ya emepe na maka a nnọọ obere window nke oge naanị anyịnya igwe na-ekwe na ogige. Echere m, na-ada ụda mgbe m nwere ike ịnọ na Yellowstone ma nọdụ na igwe kwụ otu ebe ma ghara ịnagide igwe igwe ma ọ bụ ụgbọ ala ọ bụ nrọ rutere? Ọzọkwa, a gaghị enwe igwe mmadụ ma ọ bụ na ekwesighi inwe igwe mmadụ n’ihi na mmadụ ole dị njikere ịnya igwe kwụ otu ebe na ihu igwe ogo 20 na Yellowstone Ihe mgbaru ọsọ m taa bụ ịgbago 50 ma ọ bụ somiles gaa naanị ogige nke mepere emepe? Ogige ahụ na nke a bụ Mammoth Springsby ga-enwe mmasị ịhụ anụ ọhịa bea site n'ebe dị anya ma ọ bụ jiri geyser dị ọkụ n'etiti m na anụ ọhịa bea ahụ n'ihi na achọghị m ịghọ soseji anụ ahụ nke nwere anụ ahụ maka anụ ọhịa na-achọ nri m ga-eme M ga - etinye onwe m uwe m niile ka m wee nwee ike ịnagide oyi a, mgbe ahụ m guzobere igwe kwụ otu ebe m na - adọkpụ ma m ga-akwado tupu mmadụ abịa gwa m na enweghị m ike ịpasa ebe a bụ ihe dị mma n'anya dị m mma nwere ihe m ga-atụ anya ya, nke a mara mma, ọ dịghị onye, ​​m na-achọ ụgbọ ala mana ọ dịghị mkpa, nke a dị mma, ọ bụghị otu onye, ​​ọ bụghị otu ọgba tum tum, ọ bụ ọchị ụmụaka na-apụ, ịfụ ụfụ injin ndị ahụ na-eche ụmụ anụmanụ ịbịa bụ igwe mmadụ nke ndị China. Ihe niile dị na Yellowstone nke na - egbochi m na Yellowstone bụ naanị ihe nọ ebe a naanị m zuru oke, nke a bụ ezigbo ihe ịrịba ama na - adọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha ghara ịmaba n'ime uzuoku, na-esi na geriser na NorrisGeyser Basin maka ụfọdụ ndụ gyser. ọ dị m ka o mechuru m ihu ije nkeji iri, m na-asụ ngọngọ banyere gysers, ha nọ ebe niile, ihe ụmụ nwoke ndị a na-ewute na-ewute, ga-anọrịrị na ụzọ niile ndị na-eto eto na-agba mmiri dịka atọ ugboro anọ na nkeji oge a, mgbe ọ kụrụ otu, ọ na-spits ọzọ uzuoku a afọ dị ka grey m chere na ọ bụrụ na i nwere ụfọdụ wrinkled uwe i nwere ike na-akpọ ha ebe a na dị nnọọ jide ha n'elu oghere na a ogologo osisi na wepụ wrinkles ị maara ma ọ bụrụ na ị nwere a azụmahịa nzukọ ma ọ bụ ihe nwere na gburugburu.
Mgbagharị ndị a tọgbọ chakoo. You na-abịa ebe a n’oge ọkọchị ọ na-agbasi mbọ ike ịhụ peys na geysers mgbe giiza adịghị ka ịfụ mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla Enweghị mmasị na ndị ọzọ geysers enwere isi ebe ị ga-ejupụta na ụmụ okorobịa na-enyocha m maara ugbu a azịza ya bụ ee, enwere isi na m rutere ebe ahụ m ka nwere kilomita 21 m ga-aga, enwere m ọtụtụ ihe iji igwe kwụ otu ebe m mebe ya na m mere ya na Mammoth Springs, nke a bụ ụlọ ntu m guzobere, wee maa ụlọikwuu m, mgbe ahụ ọ dị nwute na achọpụtara m na ọ nweghị ụlọ nri na-emeghe n'obodo nta a, ya mere agara m ụlọ ahịa izugbe wee zụta nnukwu burrito na gịnị ma ọ bụrụ na enwetaghị m nri nri? Ije ozi burrito a, ọ ga-abụ ọrụ ebube m ga-anọdụ ala ebe a ruo mgbe anyanwụ dara ma m ga-alaghachi n'ụlọ ntu m ma teta n'ụtụtụ wee mee ya ọzọ n'abalị gara aga na-ehi ụra dị ka Billy na mmefu ego na-eti mkpu n’etiti onwe ha rue ihe dịka elekere 1:00 nke ụtụtụ, ihe karịrị $ 50 ma ọ bụ $ 100 na ego wee wee gbadata n’ihi na ndị mmadụ na-anya ụgbọala na ịpụ, yabụ a ga m ahapụ nke ahụ, kedu ihe bụ isi? Enweela m ogwe aka ịnyịnya ígwè m ma ugbu a, m ga-apụta site na ndị nwụrụ anwụ m dị ka urukurubụba mara mma nke na-apụta site na akpị m na-agba ụta n'ihi na m na-anwa igosi ndị agha ibe m n'abalị ụnyaahụ na ugwu ndị a abụghị nke dị elu, dika m kwuru nwere.
Anọ m na-adọkpụ na ụgbọala na-adọkpụ, ọ nwere ike ịbụ ọhịa, mana ozi ọma ahụ bụ na ọ bụghị ezigbo oyi na ikekwe onye Russia nwere ike ọbụna ịnọ n'èzí ka m wee nwee uwe elu m wee nweta ngalaba ahụ na ụgbọala alaghachim n’ukwu mkpịsị ụkwụ m n’ime ụgbọ ala oyi kpọnwụrụ. dị ka popsic ise na njedebe nke imi ezì otu mpempe anụ M nwere bison jam n'isi ụtụtụ, ị maara, ọ bụ naanị bison ole na ole n'okporo ụzọ, gbanyụọ okporo ụzọ, naanị na-aga ije enweghị m ike ịgafe ya n'ihi na bison nwere ike idi oke ike achọghị m ebibi igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ nweta R na ama m na oge ọ bụla ha kwụsịrị ma tụgharịa, lee m ihe ị ga-eme nwanne m ka m wee laghachi azụ ha na elekere iri ise ọ bụla ma chere, rue mgbe ha mechara nweta mgbanwe ahụ, pụọ n'okporo ámá n'otu oge, ọ ga - apụta ma ọ bụrụ na nke a bụ eserese dịka m ga - enwe ike ịgafe ha ka m gafere ụzọ mgbochi Buffalo m wee gbagoro elu Ekwenyesiri m ike na ebe a na-adọba ụgbọala jupụtara n'ụgbọala n'oge ọkọchị ọ bụla na-eti mkpu na ụmụaka na ndị nne na nna na-etiku ụmụaka ndị a ka ha pụọ ​​ma ọ bụ na ha agaghị arịgo, mana Taa ọ bụ naanị Megain nke ihe ndị a oh anaghị m akwụsị ikwu okwu naanị m chọrọ gaa, weta nri niile m ga-ewepu na spandex, mana ụtụtụ echi dị oke mma, ọ nweghị onye na-apụ apụ, enweghị ụgbọ ala, ọ dịghị anyịnya igwe, o doro anya ruo mgbe m rutere Norris Geyser na mgbe ihe jupụtara ebe, ma Paul na ihe niile bụ ya oké mgbe ị nwere a igwe kwụ otu ebe na-enwe oge ihapu? bulie ebe a mee ya
Ngwaọrụ ogige ọ bara uru?
Ngwaọrụ Ugbodị mma nke ukwuu, mana ọ bụghị mgbe niile ka ọ kacha mma (lee ihe ndị ọzọ maka atụ). Offọdụ n'ime ihe ha dị ezigbo mma, ụfọdụ dịkwa mma. Ma na m ahụmahụ, ọ dịghị onye n'ime ha bụ ndị ọjọọ, otú ahụ ka m na-eche na-emefu a obere ihe maka angwá ọrụna m maara ga-adịgide na agaghị inu.Jun 26, 2008
(Downtempo Urban Beats) - Ya mere, enwere m nnukwu obi ụtọ ịnọnyere nwoke a. Maka ndị na-amaghị, nke a bụ Calvin Jones, onye ntụzi agụmakwụkwọ na Park Tool. Echere m na ị nwere ike ịkpọ ya oku.
N'ezie, ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị na-arụ ọrụ ịgba ígwè. Ma taa, Calvin nwere ihu ọma inwe ụlọ gị ma ọ bụ ebe ọ bụla ị na-elele isiokwu a na-ekwu maka mmejọ ise ndị ọgba aghara ndị ọgba tum tum nwere ike ịme na nsogbu ma ọ bụ ndozi. Ihe mbụ ị kwuru bụ na ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ na-ezighi ezi. - Nke ahụ bụ eziokwu, ị kọwaghị isiokwu ahụ n'onwe gị yana ọkachasị mgbe ị na-emeso ọkachamara, ịga ụlọ ahịa, ịgakwuru ndị enyi gị na ndị na-ezighi ezi, nke a bụ akọrọ akọrọ, nke ọma, ọ bụ otu klunk, klunk, klunk; Ọ bụghị akara nlele.
Mana ka ị dị njọ, ị ga-akọwapụta ihe na-eme; onye kwesiri ikowasi ihe, dika m kwuru, usoro mkpochapu bu. Mkpụrụ aka mgbodo bụ ikpe amaala. ị gaa ụlọ ahịa ahụ achọrọ m akara aka ala ọhụrụ nke a ga - etinye n ’aka aka ọhụrụ ka ihe ruru kilogram iri na ise ma emesịa ị pụọ n’ụlọ ahịa ahụ, ọ ka na - eme mkpọtụ.
Ọfọn, ọ nwere ike ịbụ na crank ogwe aka yinye bolt. Anyị akọwaghị ihe ọ bụ, yabụ ịkwesịrị idozi nsogbu dị iche iche. Enwere nke dị aghụghọ, ikekwe nke dị aghụghọ, enwerekwa nsogbu na nke abụọ m, enweghị ntụkwasị obi mgbe anyị malitere ime ihe m na-akpọ nkuzi pasta: anyị na-atụba spaghetti na mgbidi, ka anyị tinye pedal ọhụrụ; ka anyị yi uwe, anyị na-awụkwasị ego, naanị na-agbanye na mgbe ụfọdụ ọ dị jụụ.
Oh, emechara m mezie ya John, ọ ga-abụrịrị crank, silring, bracket, pedal, akpụkpọ ụkwụ, ọ bụkwa ikpere m, ebe m gbanwere ikpere m, m dị mma ugbu a. Yabụ, enweghị ntụkwasị obi, ọnụọgụ abụọ; Kọwaa ya, banye ma mee ya - Ee, dozie nsogbu a. Na mgbe ahụ anyị nwere ngwaọrụ na-ezighi ezi maka ọrụ ahụ.
Gịnị bụ kpochapụwo anyị hụrụ ziri ezi? Ma nke ahụ nwere ike ịbụ maka m, mgbe m hụrụ onye na-eji ngwá ọrụ na-ezighị ezi, m na-ama jijiji n'ime. Oh, ọ jọgburu onwe ya, ọ bụghị ya? - Ee - ọ jọgburu onwe ya - Ma bụrụkwa onye ziri ezi, teknụzụ na-aga n'ihu ma anyị hụrụ na ọtụtụ, nwatakịrị a, enwere m igwe kwụ otu ebe na kọleji ma ọ dị mma ma enwetara m ọrụ na ọrụ m wee nweta oge n'ikpeazụ m ga-enweta M laghachiri n'ụgbọ ịnyịnya ígwè m ma zụta nke a ọmarịcha oge a ị maara na m nwetara njem m / ndagwurugwu / ihe ọ bụla ma m ga-esi na ngwaọrụ m nke dị mma na 1980 - Dust the cobwebs! - Ọfọn, nke ahụ bụ usoro ọsọ ọsọ 12; ọ dị ezigbo mkpa, ọ bụghị otú ahụ. Yabụ kedu ihe eji arụ ọrụ, ọ dị mma, osisi na okwute ka eji taa.
Ma enwere ọtụtụ ngwaọrụ pụrụ iche, ọtụtụ ndị ọhụrụ: Mgbazi ala, nke a abụghịzị aka nkwado nna nna gị. Yabụ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka ọrụ - Ee, ọ bụ n'ihi na ị chọghị itinye ihe ọghọm na-emebi emebi, ị? karia adighi ike.- Ee, nke ahu bu ezigbo ihe; Ọfọn gịnị kpatara ya? Ọ bụrụ n’ịgbalị ime ka ihe dị fechaa, obere ihe - ọ ga - adị ntakịrị ma oso - howzọ maka ịgbagharị ọsọ? - Ọ ga-amasị m ịza nke ahụ, John, mana enweghị m ike, enwere m, aga m aga, m ga-eso gị gaa na nkeji ise na-agba ịnyịnya ụmụ okorobịa ahụ igwe kwụ otu ebe adịghịkwa njikere ya mere m kwesịrị idozi brek . - Chere, chere, chere; Bịa, were oge gị - gịnị kpatara na anaghị m eme nke a n'abalị ụnyaahụ mgbe ị gwara m? Eeh, yabụ wepụta oge iji mee ya n'ezie, ọ bụrụ na ị nọ ọsọ ọsọ, ọsọ ọsọ, ọsọ ọsọ iji gabiga, ọmarịcha ihe ngwọta plasta, ọ dị mma, anyị ga-ewere chịngọm, aka nri, na waya ụfọdụ wee mezie ya , naanị maka ugbu a, na anyị ga-abịa mgbe e mesịrị; Won't gaghị, ị gaghị, ya mere emela ngwa ngwa mee ya tupu oge eruo, anyị nwere ajụjụ mbụ, gịnị ka m na-ebu na pannier m? Ọ dị mma na m nwere nke a na nke a na nke a ka m chọrọ ka ị mara na ị nyochara ma nyochaa igwe kwụ otu ebe gị nke ọma na ọ na-edozi ya nke ọma.
Nke ahụ dabara na akpa igwe gị; Ọ dị obere. Ọ na-agbada n'ezie, pere mpe. Yabụ, were oge gị mee ihe, gụọ maka ya, lelee PDFs na atụmatụ ahụ, lee isiokwu ndị dị na ọgbakọ a - ee, enwere ike ịnwe ndụmọdụ adịghị mma - ee, ee.
Mana nke ahụ nwekwara ike, mụta, ịghara ime ihe nwoke ahụ mere. Were foto nke nzukọ a, ị maara ihe na-aga ebe tupu ịmalite. Ee, chee echiche banyere ya tupu oge eruo.- Ee, ugbu a ewepụla m ihe mgbochi Campagnolo Delta otu oge.- Obi ụtọ! - Fun bụ otu ụzọ isi kọwaa ya, echere m na m mere ya ebe ọ bụla na profaịlụ mgbasa ozi m.
Bugote foto ya tupu oge, n'oge na mgbe emechara. - Ọ dị mma! - Ma nke ahụ bụ ihe atụ mara mma nke eserese sekit ndị a, echiche ndị a gbawara nke breeki ndị a nke m na-achọta enweghị ike ịchọta ndụ m ebe ọ bụla Yiri m ijide n'aka na m were foto niile ebe ahụ.- Ezigbo.- Maka na enwere enweghị ụzọ m chọrọ ịgbanwe, ekwenyere m na isi anọ ma ọ bụ ise dị mkpa na breeki a.- Nke ahụ ziri ezi. - Na igodo alaeze ukwu Allen igodo. - Ee? - Oh, ọ bụ nro zuru oke, mana m mere ya n'ihi na m were oge m.
O were m obere oge. Ikpeazụ gị, gaa n'ihu. - Ajụla enyemaka.
Jụọ ndị ọzọ, debe nke a, lee ihe a ga - enweta anya ọzọ. Jụọ enyi gị, gaa n'ụlọ ahịa. Were ihe omumu; were ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ogige ntụrụndụ.
Mee akwa ụkwụ; kporie ya.- Onweghị ihe dị njọ n'ịjụ otu n'ime ndị ọgba tum tum gị ma ọ bụ onye otu klọb gị ma ha nwere otu nsogbu ahụ na otu ha siri mee ya. Echere m, anyị abụghị ụyọkọ ọjọọ, anyị, ndị ọgba tum tum? - Mba - Echere m, mgbe ụfọdụ, m ga-ajụ Doddy site na GMBN - Chaị - m ga-arịọ ya maka enyemaka.
Ọ na-ewute m ma ahapụ m nke m Ji nganga, agara m jụọ ya, 'Doddy, ị nwere nke a na mbụ?' - Ha na igwe kwụ otu ebe, ha nọ na agbụrụ anyị - Kachasị, anyị niile nọ n'otu, anyị bụ ndị enyi, ọ bụghị anyị? - All otu na wiil abụọ; Jụọ - atụla ụjọ ịjụ maka na a jụrụ anyị, ekwenyesiri m ike gị, ị makwaara, ajụjụ ha na-eme ihere ịjụ, ọ bụghị ya? - Mm-hmm - Ha na - ekwu mgbe niile 'Oh, ọ dị nwute m; 'nke a bụ ajụjụ onye mbido.' Ma onye ọ bụla na-amalite ebe, ọ bụghị ya? - Nke ahụ ziri ezi - N’ezie, ha nwere ike bụrụ ajụjụ kachasị mfe ịza n’ihi na ha kwụ ọtọ ma ọ bụ kwụ ọtọ. - Mana ịdị ọhụrụ, iweta echiche ọhụrụ ma jụọ ha, ndị ọhụrụ ndị a, ọ dị mma. - Ee, ọ dị mma. - Weta ya. - Agbanyeghị, ndị a bụ ezigbo Calvin, ise, nnukwu ụdị mmezi nsogbu ndị mmadụ na-abanye.
Ihe ngwọta gị n'ezie, iji nagide ha n'ụzọ dị irè, nke ahụ nwere ike ịdị mfe --- Wụba n'ime ọdọ mmiri ahụ. Banye ebe ahụ ma tinye aka - naanị tinye aka. Ma nke m, ihe m nwere ike iwepụ bụ iji ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị yana iwepụta oge mụ na ha, emela ngwa ngwa.
n'asọmpi ịgba ịnyịnya
N'ihi na nke ahụ bụ ihe kachasị - --- mgbe anyị na-asị na-awụlikwa elu na ọdọ mmiri, ọ pụtaghị na ị ga-ebu isi; lee ya anya nke oma, ka anyi gawa. Eleghi anya ị ga-ebu mkpịsị ụkwụ gị n'isi- Ee, mkpịsị ụkwụ gị dị mma, wee ga n'ihu.- N'oge na-adịghị anya ị ga-adanye na mmiri. (ọchị) - Nke ahụ ziri ezi, ntụgharị azụ na John. - Mana daalụ, Calvin, maka ịkwụsị ma gwa anyị obere ihe na ndụmọdụ ndị a. - Ọ dị mma ịnọ ebe a - are dị oke mma na m ga - eme ya dịka nke ahụ na - akpata ọtụtụ isi ọwụwa na m nwere ike iwetara gị nnukwu ọdịnaya karịa oge niile.
Ọzọkwa, nye ya nnukwu isi mkpịsị aka ya na mpaghara ebe a na - ekwu - - - Ee, ala, dị ka mgbe niile. Nakwa banyere ụlọ ahịa GCN n'okpuru ụlọ ahịa. Gaa na globalcyclingnetwork.comebe Anyị nwere ụyọkọ nke ihe dị mma gụnyere ọbụlagodi Pizza cutter pizza cutter.
Na onye na-emepe emepe kalama biya, nri? - Ọ na-emepe mmanya na-aba n’anya. - Ee, ọ ga. Bee ihe ndị ọzọ karịa Pizza.- Nke ahụ ziri ezi.- Amaghị m ihe.- Achịcha kuki .- Mgwakota kuki, ebe anyị nọ.
Ya mere, ekele maka ikiri na ugbu a, iji hụ nnukwu isiokwu ọzọ, ebee ka ị ga-pịa? - Ebe a. - N'ebe a. - Ee, ebe a. - Echere m na ọ dị mkpa ka enyochare isiokwu ahụ tupu ị gaa n'apata - Ọ dị mma, mee ha.
E-anyịnya igwe ọ bara uru?
Maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè ịrụ ọrụ, ha bụ ihe dị oké ọnụ ahịa. Enyemaka moto ahụ na - enyere gị aka ịbịa n’oge mana ọsụsọ ga - adị gị karịa ma ọ bụrụ na ị rutere n’ọdụ ụgbọ ala gịigwe kwụ otu ebe. Akụkọ ahụ kwuru nabu-anyịnya igwega-adị mfe karịa ndị ọzọbu-Ugbo 'site na njedebe nke 2020.Ọnwa Jun 14, 2021
Ndi e-bikes n'uzo na ezighi ezi?
Can nwere ike ịgba ịnyịnyaigwe eletrikma ọ bụrụ na ị bụ 14 ma ọ bụ karịa, ọ bụrụhaala na ọ mezuru ihe ụfọdụ achọrọ. Ndị aigwe eletrika maara dị ka 'eletrik na-enyere aka' (EAPCs). Chọghị ikikere iji gbagoo otu na ọ dịghị mkpa ka edebanye aha, ụtụ isi ma ọ bụ mkpuchi.
Ejiri akụrụngwa igwe eji eme njem na USA?
Paul, Minnesota. O zuru ezu ikwu, ọ masịrị anyị. Ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ugbu a na-enyefe ngwaahịa ha niile na mba ofesi,Ogigeka na-emepụta ọtụtụ n'ime yangwaọrụ- pasent 85 ịbụ nke ziri ezi — kpọmkwem n'ụlọ ọrụ ya dị square mita 45,000.Mar 7, 2012
Igwe igwe eletrik na-aga na-enweghị ịpị ụkwụ?
Ọ dabere naigwe kwụ otu ebe. Fọdụigwe eletrikrere na North America na-enye gị ohere ịrụ ọrụ site na ịgbanye ntụgharị ahụna-enweghị pedal. Ọbụna makabu-anyịnya igwenke nwere trotul, ị ga-achọpedalmgbe olena-agaogologo ugwu, ugwu, ọ bụ ezie na ị gaghị eme yapedalsiri ike.
Kedu otu ọsọ igwe kwụ ọtọ 500w E na-aga?
Kedu otu ngwa ngwa igwe eletriki 500w na-aga? .B.500w igwe eletrik na-agaodika 25 mph (40.23 km / h) na ala dị larịị.Ọnwa Ise 14, 2020
Onye na-eme Parktools?
Ngwá Ọrụ ParkỌ bụ Eric Hawkins, nwa Howard Hawkins, nwe ma na-arụ ọrụ ugbu a, ma na-enyezi ihe karịrị narị atọ ịgbazi ígwèngwaọrụke udịm.
Onye nwere Parktool?
Eric Hawkinsbu onye nwe ya/ CEO na Chief Mechanic naToollọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Parkonye kachasi elu nke uwa nke ndi igwe eji agba ahia. N'ịbụ onye zụlitere n'ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe, ọrụ Eric malitere ịchịkọta Sting Rays na Varsity (s) n'ụlọ ahịa nna ya n'etiti afọ ndị 70 wee gaa ọrụ naNgwá Ọrụ Parkmalite na 1983.Eprel 14, 2019
Ọ nwere ebe a na-adọba ụgbọala na South Wales?
BikePark Wales bụ ogige mbụ UK na-ebu ugwu zuru oke na ndagwurugwu South Wales, nke ndị na-agba ịnyịnya wuru maka ndị na-agba ịnyịnya. Anyị kwenyere na ịme ka mmadụ niile nwee ike ịnyagharị ugwu ugwu site na oke ihe. Ridebọchị ịgba ọsọ agafe. site £ 11. Day ride pass + uplift.
Kedu nke bụ ogige igwe kwụ otu ebe na UK?
Mmadụ Bịa ka BikePark Wales. BikePark Wales bụ ogige mbụ Britain na-ebu ugwu zuru oke na ndagwurugwu South Wales, nke ndị na-agba ịnyịnya wuru maka ndị na-agba ịnyịnya. Anyị kwenyere na ịme ka mmadụ niile nwee ike ịnyagharị ugwu ugwu site na oke na nke dị jụụ.
Enwere ogige igwe kwụ otu ebe na Duluth?
N'elu ihe karịrị 700 ụkwụ nke ọdịda dị larịị, ọ na-atụnyere ebe ịnya ịnyịnya nke a hụrụ n'ugwu ndị sitere na East na West. Ogige igwe kwụ otu ebe bụ obere mkpụrụ egwuregwu mgbago ugwu dị na Duluth. All ndị a obere iberibe achikota na-eme nke a ebe tinyere Lake Superior ndị dị otú ahụ ihe dị ịtụnanya na-agba ịnyịnya center. GỤKWUO...